Bulshada-daryeelka | Samfunnskunnskap.no
Bulsho daryeel waa bulsho dhinacyadeeda muhiimka ah sida heerka nolosha, waxbarashada iyo caafimaadka lagu sugo iyada oo la adeegsanayo qeybsiga waxa la wada leeyahey.
Faa’iidooyinka bulsho daryeel waxa ka mid ah iyada oo waxyaabaha la wada leeyahey si fiican loogu qeybiyo dadweynaha si ay u helaan waxyaabaha aasaasiga ah sida hoy, cunto, caawimo caafimaad iyo waxbarasho.
Bulshada daryeelka Norwey waxa loo yaaqaanaa xukuumad daryeel waayo dadweynaha, xukuumada iyo degmooyinka ayaa masuul ka ah daryeelka.
Bulshada daryeelka waxa caadiyan lagu maalgeliyaa dadweynaha oo bixiya cashuur iyo khidmad. Sidoo kale waxay xukuumadu dheefta daryeelka ku maalgelisaa dakhliga ka soo gala dhoofinta shidaalka iyo gaasta.
Inkasta oo masuuliyada guud ee daryeelku saaran ythey xukuumada, waxa qayb fiican ka qaata ururada samofalka iyo shakhsiyaad gaar ah.
Bulsho-daryeel waa bulsho leh daryeel aad u sarraysa oo si aada oo siman loo qaybiyey.
Daryeel waxa ku baxa lacag. Dhammaan dadka Norwey deggan waa ay ku jiraan bixinta daryeelka iyagoo bixiya cashuurta iyo khidmadaha.